कोटीहोमको पीसीआर राजनीति र अबको निकास « तपाईंको साझा इजलास
झापामा ५३५ जनाले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप,
बिर्तामोडमा टिफिन बक्सको सेवा प्रारम्भ,
कोटीहोमको पीसीआर राजनीति र अबको निकास
एकका लागि एक अभियानले सोमबार नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलालाई कोटीहोम लगेर पीसीआर ल्यावको अवलोकन गराएको छ । त्यसअघि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइले पनि ल्यावको निरिक्षण गरेर फर्कनु भयो । राजनीतिक दलका धेरै जसो नेताहरु, मन्त्रीलाई ल्याव देखाउन अभियान हरेक दिन तल्लीन छ । त्यसको मक्सद भनेको कुनै पनि हालतमा कोटीहोममा पीसीआर परीक्षण गरिनुपर्छ भन्ने नै हो ।
शुरुआतमा धन्यवाद पाएको एकका लागि एक अभियानले पीसीआर परीक्षणका लागि ल्याव सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर अघि बढ्यो । ल्याव तयार गरेको एक महिना लगभग वितिसकेको छ । असार १० गतेदेखि पीसीआर परीक्षण गर्ने भनियो तर भएन । त्यसपछि साउन १० गतेको मिति तय गरेर सार्वजनिक गरियो । त्यो पनि सफल भएन । मुख्यमन्त्रीले दुई दिनभित्र निर्णय गरेर सञ्चालनमा ल्याइन्छ भन्नु भएको पनि आज छैठौं दिन वितिसक्यो ।
मुख्यमन्त्रीले बचन दिएको पाँचौं दिन पुगेपछि कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला त्यहाँ पुगे । उनी त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय समितिले जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र दिएर मेची अस्पतालमा हुँदै आएको परीक्षण त्यहाँबाट अन्तै सार्न माग गरेको समाचारहरु बाहिर आयो । नेता सिटौलाकै एउटा विज्ञप्तिले भद्रपुरमा सञ्चालन हुन लागेको कोभिड अस्पताल नै भाँडिएको दुनियाँलाई थाहा छ । जसका कारण भद्रपुरमा समयमै उपचार शुरु हुन सकेन । अहिले उनै सिटौला कोटीहोम पुगे । कसैले ल्याव सञ्चालनका लागि पहल नगरेर उनी पुगेका हुन् वा त्यहाँको ल्याव समेत सञ्चालन गर्न नदिने उदेश्य हो ?
यो सबै दृष्य विश्लेषण गर्ने हो भने पीसीआर ल्याव देखाएर राजनीति नगरेको भन्न सकिन्न । तर, के अभियानमा जोडिएकाहरु सबै राजनीति गर्न जोडिएका हुन् त ? स्वार्थ कै कारण जोडिएका हुन् ? पक्कै त्यस्तो नहुन सक्छ । सबैलाई एउटै भाँडोमा राखेर हेर्नु पनि मुर्खता हुन सक्छ ।
एकका लागि एक अभियानले आम नागरिकको निम्ति ल्याव सञ्चालन गर्ने विषय महत्वपूर्ण र आवश्यक छ । त्यसका लागि धन्यवाद दिन हिच्किच्याउन जरुरी छैन । जो कोहिले यस्ता सामाजिक काम गर्न आफुलाई समर्पित गर्दैनन् । तर, अभियान शुरुआतबाटै धेरै चुकेको देखिन्छ । जसका कारण आजसम्म ल्याव सञ्चालन हुन सकेको छैन । ल्याव खरिद गरेर आफै सञ्चालन गर्ने अभियानको लक्ष्य थियो । अभियान आफैमा वैधानिक नभएकाले त्यो संभव नै थिएन । तर, अभियान यो महामारीमा आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले सबैको भावनात्मक सहयोग रह्यो । जब आफै सञ्चालन गर्न नसकिने ठाउँमा अभियान पुग्यो तब सरकारलाई ल्याव बुझाउने उद्घोष गरियो । त्यो पनि अभियानकै सर्तमा कोटिहाममै सञ्चालन गनुपर्ने ।
सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेपछि जिल्लास्तरीय नेताहरुले सञ्चालनको लागि भरपुर दवाव दिइरहेका छन् । सरकारलाई पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु नै छ । तर, पनि अहिलेसम्म सञ्चालनको कुनै चाँजोपाँजो नमिल्नुले आश्चर्य चकित बनाएको छ ।
मलाई लाग्छ, यो सोर्सफोर्सले चलाउने चिज होइन । सरकारको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा सरकारले पक्कै लापरवाही गर्दैन । अझ कोटिहोम संवेदनशील क्षेत्र हो । आर्यघाट, साधुसन्तको बसोवास गर्ने ठाउँ, अपांग, असाह्यहरु त्यहि कोटिहोम धार्मिक क्षेत्र आसपासमा बस्ने गर्छन् । बाक्लो बस्ती र व्यापार समेत भएको ठाउँमा पीसीआर परीक्षणको संभावना अध्ययन गरिएकै हुनुपर्छ । प्राविधिकहरुको टोलीले झापाको तीन ठाउँमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । दमक, कोटीहोम र मेची अस्पताल । मेची अस्पताल बाहेक टोलीले उपयुक्त कतै भनेको छैन । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि थप कुरा गरौंला ।
अब ल्याव कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने तरि पनि सोच्न जरुरी छ । आजसम्म त्यहाँ रोकिनुको मुख्य कारण भनेको स्वीकृति प्राप्त नहुनु हो । तर, कोटिहोममा स्वीकृति प्राप्त भएपनि सञ्चालनका लागि पत्रले मात्र काम गर्दैन । त्यसमा चाहिने जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री महत्वपूर्ण हुन जान्छ । जनशक्ति सरकारले त्यहाँ पक्कै दिन सक्दैन । किनभने, मेची अस्पतालमा परीक्षणमा काम गर्ने जनशक्तिले दुवै ल्याव एकै ठाउँमा सञ्चालन गर्न सक्छ । फेरि जनशक्ति थप गरेर सरकार अनावश्य भार नथप्ने पक्षमा छ । कसैको इज्जत जोगाइदिन सरकारले मासिक ३५÷४० लाख खर्च नगर्ला । यसको अर्थ, एउटै टिमले मेची अस्पतालमा दुवै ल्याव राख्ने हो भने सहजै सञ्चालन गर्छ । सरकारलाई दोहोरो भार पनि पर्दैन ।
सरकारले अब दियो भने २ देखि ३ दिनभित्र स्वीकृति दिन सक्छ । नेताहरुको तीब्र दवावले पछिल्लो संभावना बढेको हुन सक्छ । तर, सरकारले स्वीकृति दिएपनि कोटिहोममै ल्याव सञ्चालन लामो समय टिक्दैन । त्यो २÷३ महिनामा बन्द हुन्छ । कि त मेची अस्पतालले मेसिन उठाएर भद्रपुर नै लैजानुपर्छ । यो परिस्थिती पक्कै आउने छ । अब, यहाँ जीत हारको प्रसंग पनि आउन सक्छ । कोटिहोममा ल्याव चलाउनुलाई अयिानले जीतको रुपमा हेर्न सक्छ । त्यो निरन्तर सञ्चालन नहुने भएपछि यसलाई जीत मान्नुको अर्थ छैन । बरु, बेलैमा मेची अस्पतालमा मेसिन बुझाउनु जीतको रुपमा हेर्न सकिन्छ । पछि उठाउनै पर्यो भने लज्जाको विषय बन्नेछ ।
यो अभियान सफल बनाउन हामी सबै झापाबासीको उत्तिकै दायित्व छ । तर, अभियानका नाममा गलत नजिर बसाल्न चाँही दिन हुदैन । हामीलाई पीसीआर ल्याव चाहिएको छ । तर, कोटिहोममै हुनुपर्छ भन्ने लिडेढिपी हामीले गर्न हुदैन । यदि सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो भने सरकारले चाहे मेचीमा लगेर परीक्षण शुरु गरोस् वा धरान लैजाओस् । त्यो सरकारको स्वतन्त्रताको कुरा हो । मापदण्ड अनुसार सरकारले आवश्यक भएको ठाउँमा राखेर परीक्षण गर्न सक्छ । त्यसमा अवरोध कसैले गरिरहेको छ भने त्यहाँभित्र स्वार्थ र राजनीति जोडिएको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
झापामा केहि वर्षदेखि निरन्तर अभियानहरु सञ्चालन भइरहेको छन् । अभियान सफल भएका छन् । तर, अभियानले के उपलब्धी हासिल गर्यो भनेर हामीले कहिल्यै समीक्षा गरेका छैनौं । अभियानलाई सफल मात्रै बनाउने कि उपलब्धी मुलक बनाउने हो ? विगतका केहि अभियानलाई स्मरण गरौं । ल्याव राख्न जवरजस्ती गरिराखेको ठाउँ समर्पण भवन हो । समर्पण भवन समर्पण अभियानबाट निर्माण गरिएको थियो । त्यहाँ धेरै श्रमजिवीहरको पसिना छर्लङ्ग छ । त्यो अभियान सफल भयो । तर, त्यसको उदेश्य पुरा भए नभएको समीक्षा सायदै भएको छैन । दशकर्मका लागि निर्माण गरिएको भवनमा आज ल्याव राख्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? यसको मतलव, समर्पण भवनको उदेश्य पुरा हुन सकेको छैन । झापामा गरिव, विपन्न जो सुकैको पनि झुपडी नै भएपनि घर छ । घर हुनेले त्यहाँ दशकर्म गर्दैनन् । म आग्रह गर्न चहान्छु, त्यो बेलाका अभियान्तालाई । त्यो भवनमा यत्तिका वर्ष वितिसक्दा कति परिवारले दशकर्म गरे ? सार्वजनिक गर्नसक्नुहुन्छ ? मलाई लाग्छ, त्यो अभियान सफल भयो तर उपलब्धीमुलक हुन सकेन ।
यस्तै, गत वर्ष दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि महाअभियान सञ्चालन गरिएको थियो । त्यो बेला नेपालको चर्चित ब्याण्ड नेपथ्यलाई डोमालाल रंगशाला उतारेर हजारौं दर्शक नचाइयो । अभियान सफल भयो । तर, त्यस कार्यक्रमको उदेश्य कति पुरा भयो ? आम नागरिकमा चासो मरेको छैन । सार्वजनिक अभियान भएकाले सबैले चासो राख्ने नै छन् । यसमा आपत्ति जनाउन हुदैन । त्यो अभियानमा कति आम्दानी भयो , कति खर्च भयो ? अझै सार्वजनिक नभएको चर्चा भइरहन्छ । त्यो कार्यक्रमको मुख्य उदेश्यमा प्रदेश १ भर दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि ट्राफिक लाइट जडान गर्ने थियो । अभियान्ता ज्यूहरुमा सामान्य नागरिकको हैसियतले प्रश्न छ, कहाँ कति थान लाइट जोड्नु भयो ? अन्य अभियानका बारेमा फेरि जोडौला ।
अभियान शुरु गर्ने जसोतसो पार पनि लगाउने तर, त्यसको परिणाम उपलब्धी मुलक भएन भने अर्थ रहँदैन । म एउटा कुरा दावीका साथ भन्छु, पीसीआर ल्याव कोटिहोममा शुरु भएपनि निरन्तर सञ्चालन जटिल विषय हो । आज जुन किसिमले जवरजस्ती गरिदैछ, ल्याव राखेर परीक्षण शुरु गरेपछि त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम वा दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकार वा एकका लागि एक अभियानले ? सरकार त्यहाँ सञ्चालन गर्न किमार्थ तयार छैन । जवरजस्ती गर्ने भनेको अभियान्ताहरुश्र नै हुन् । उनीहरुले त्यसको सबै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सरकारसँगको कुनै समन्वय विना शुरु गरिएको ल्याव राख्ने कार्य स्वार्थकै कारण सञ्चालन हुन नसकेको हो । यदि सरकारलाई पीसीआर मेसिन समयमै उपलब्ध गराएको थियो भने आजसम्म हजारौंको पीसीआर परीक्षण भइसक्थ्यो । दातामाथि न्याय हुन्थ्यो । अब दातालाई के जवाफ दिने ? शुरु हुन्छ , शुरु गछौं, सरकारले काम नै गरेन, कुरा हुदैछ, अब २ दिनपछि, उद्घाटनको व्यानर बन्दैछ । यस्ता जवाफले अबका दिन झन्झन् जटिल बन्नेछन् ।
झापामा ५३५ जनाले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप
बिर्तामोड । झापामा पहिलो दिन पाँच सय ३५ जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् ।
विराटनगर । प्रदेश १ मा कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरु गरिएको छ । आजप्रदेश
झापामा तीन स्थानबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन शुरु
बिर्तामोड । झापाको तीन वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘कोभिशिल्ड’ लगाउन सुरु गरिएको छ
‘कृषिथोकमा अब किसानमाथि ज्यादती हुन दिन्न’
व्यापारीको मनपरी र विचौलियाको एकाधिकार बन्द गर्ने बिर्तामोड । कृषिथोक बजार बिर्तामोडमा नयाँ नेतृत्व आएपछि
दमकमा ओरियन्सको करोडौंको अवैध खाद्य वस्तु बरामत
सुकुम्बासीलाई दिन तयार भयो दमकमा आकर्षक घर
बिर्तामोड वाणिज्य संघमा दर्नालले सचिवमा उम्मेद्वारी दिने
आदर्शमा विधार्थीको आकर्षण
बिर्तामोडमा टिफिन बक्सको सेवा प्रारम्भ
बिर्तामोड वाणिज्य संघको निर्वाचन : अध्यक्षमा छ जनाको दावेदारी